सरकारी कामको सहजताबारे यस्तो छ जनताको प्रतिक्रिया… – Online Jagaran
४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०१:१७ April 17, 2018 जागरण
जनतालाई सहज ढंगले छिटो छरितो सेवा दिनु हरेक सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । काममा पारदर्शितासँगै सेवाग्राहीको चाहाना बमोजिम काम गरे मात्रै सरकारी कार्यालयको सार्थकता हुन्छ । सरकारी कार्यालयबाट सहज सेवा नपाएको गुनासो बारम्बार सेवाग्राहीबाट सुन्नमा आउँछन् । यसै सन्दर्भमा हामीले सरकारी कार्यालयबाट तपाईँले कत्तिको सहज तरिकाले सेवा पाउनुभएको छ ? भनेर सोधेका छौँ । पढ्नुहोस् जनताको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तैः
– शिव प्रसाद आचार्य, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत । सरकारी कार्यालयको सेवासुविधा अझै पनि सहज छैन । सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा आफ्ना आफ्ना मान्छेहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने तर अरुलाई खासै मतलव नगर्ने चलन छ । अझ कतै कतै त अलिअलि नास्तापानी (घुस) दिने भए पहिला आउँछ पालो नत्र पर्खिरहनुस् भन्नेजस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ।
– नन्दा सोमौ, वीरेन्द्रनगर १२ चनौटे सुर्खेत । हामीले भनेको बेला काम हुँदैन । कुर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । काम गराउन गाह्रै हुन्छ ।
– यामलाल मल्ल, वीरेन्द्रनगर ९ मंगलगढी । काम नहुने होइन, भइरहेकै छ तर समयमा हुँदैन । यसमा कतिपय त हामी आफ्नै कमजोरीले पनि हुन्छ । कागजपत्र पुरै तयार नगरेर काम थाल्ने अर्थात् प्रक्रिया पुरा नगर्ने तर काम गर्न खोज्ने हुन्छ । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने चिनेको नाताले मेरो काम त चाँडै हुन्छ है ।
– विष्णु प्रसाद रेग्मी, वीरेन्द्रनगर ४ भैरवस्थान । आज हुँदैन भोली आउँनुस् । नमिलेको प्रक्रिया त भन्नैपर्छ तर प्रक्रिया मिलेको छ भने त काम रोक्न हुँदैन नि ।
– यामकुमार रेग्मी, वीरेन्द्रनगर ३ सुर्खेत । प्रक्रिया सवै पुगेका काम त ढिला हुँदैनन् ।
किन भयो कर्णालीको वजेटमा ढिलाई ?
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने कर्णालीका मन्त्रीहरुलाई जनता के भन्छन् ? (अडियोसहित)
२० जेष्ठ २०७५, आईतवार ०६:१९ June 3, 2018 जागरण
पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाउन जनताको सुझाव यस्तो छ (सुन्नुहोस् अडियो)
२५ पुष २०७६, शुक्रबार ०६:२७ January 10, 2020 जागरण
७ चैत्र २०७५, बिहीबार ०७:१४ March 21, 2019 जागरण